Microcement: chinhu chiri kudiwa zvakanyanya munyika yekuchinja | Bezzia
Bezzia | 19/06/2022 08:48 | Decoration, Tricks kushongedza
El musha ndiwo musimboti wekugara zvakanaka kwedu, tichibatira kuvimbisa kuti tiri pasi pemipimo yemhando yehupenyu yatinofanirwa. Kuti uwedzere hunhu hwakadai sekugara, kunyaradza kana aesthetics, kuita shanduko ndechimwe chezviito zvinogutsa. Basa ratinogona kukudziridza isu pachedu kana tikanyatso dzidza sarudzo dzakasiyana dzinotungamira mumusika wazvino; zvakadai se microcement. Chinhu chinowedzera kufarirwa chakazvimisikidza seakisi muiyo DIY philosophy (ita wega).
1 Chii chinonzi microcement uye chinogona kuiswa kupi?
2 Ndezvipi zvakanakira microcement
Chii chinonzi microcement uye chinogona kuiswa kupi?
Kana isu tikaita sarudzo yekuita shanduko mune imwe kana akati wandei kamuri yemba, zvakakosha kuti tiite ongororo yezvakasiyana zvigadzirwa zvatiinazvo. Mukuita kudaro, isu munguva pfupi tinozviwana takanangana neiyo microcement: chinhu chakagadzirwa kubva simende, resin, additives uye mineral pigments inogoneka zvizere. Ichi chinyorwa chiri kushandura zvese zviri munyika yedhizaini yemukati uye, kana tikadyara mune yakagadzirira-kushandisa-microcement, tinogona kuishandisa isu pachedu. kusvika madhigirii matsva ekushongedza kwakanaka.
Nepo zvimwe zvinhu zvinotimanikidza kutora maitiro ekuvaka anodhura, microcement inotevera DIY wave. Nenzira iyi, tine simba reku kuita kuvandudzwa mune imwe neimwe yemakamuri emba pasina zvinhu zvakaita semari kana nguva inoiswa kwatiri. Uyezve, microcement inoshanda pamhando dzese dzepasi, kusanganisira mataira, mataira uye plasterboard. Basa ratinoita mumazuva mashoma kuti tinakirwe nenzvimbo ine hunyanzvi, ine dhizaini inoenderera uye yakagadziridzwa kune zvatinoda.
Iko kushandiswa kwe microcement kunonyanya kufarirwa mudzimba dzekugezera, semhedzisiro yekugona kwayo kubvisa majoini pauriri nemadziro kusiya kutaridzika kwekuenderera. Zvakadaro, chero kutsamira kwepfuma kunogamuchira zvinhu nemaoko maviri, sekicheni, imba yekurara, patio yekunze kana imba yekutandarira. Zvese izvi kugona sarudza nerusununguko rwakakwana zvese tonality uye magadzirirwo echinhul. Mune mamwe mazwi, nekuda kwehukuru hwakakura hwe pigment kubva kune makuru ekugadzira pigment, isu tichave nemagadzirirwo chaiwo atagara tichirota.
Ndezvipi zvakanakira microcement
Kunyangwe chiri chokwadi kuti kuita kwakasiyana-siyana maererano nekushandiswa kwayo uye mavara atinogona kusarudza atove chikonzero chakakwana chekutsigira ichi chinyorwa, tinowana zvimwe zvikonzero zvakawanda zvakakodzera kuongorora. Ramba uchifunga kuti mutengo wechigadzirwa ichi hauna kunyatso kudhura kana tikachienzanisa nedzimwe sarudzo; zvisinei, tichiziva kuti isu tinochengetedza pakuhaya masons, zviri pachena kuti ndiyo imwe yedzimwe nzira dzakachipa pamusika. Asi mari haisi iyo yega kunetseka mupfungwa dzedu panguva yekugadziridza, saka Ngationei akawanda masimba e microcement.
Yokutanga ndeye kunamatira kunoshamisa kwainopa pamarudzi ese enzvimbo, ingave yakatwasuka kana yakachinjika kana mukati kana kunze. Chimwe chinhu chisingatore nguva kuti chitange kushanda, nekuda kwekuomesa-kuoma kwayo. Saizvozvowo, zvakakodzera kutaurwa indekisi yayo yakakwirira yekudzivisa, kukwanisa kumira abrasion, scratches uye kurohwa Kufanana nezvimwe zvinhu zvishoma. Kana kuri kuchengetedza kwayo, microcement iri nyore kwazvo kuchenesa: mvura chete uye sipo isina kwayakarerekera inodiwa. Mabhenefiti akasiyana ayo, pamwe chete nekuchengetedza kwezvakatipoteredza uko kushandiswa kwayo kunosanganisira, zvinokurudzira vanhu vazhinji kuishandisa mudzimba dzavo.
Saka, ikozvino zvaunoziva zvese izvo microcement inogona kukuitira, yave nguva yekuti iwe udzidze ndezvipi zvitoro zvakanakisa zvekuisa mari mune izvi zvinhu. Ehe, inguva yekuchinja kweimba yako iyo ichaita kuti iwe unakirwe zuva rega rega kusvika zvakazara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Tricks kushongedza » Microcement: chinhu chiri kudiwa zvakanyanya munyika yekuchinja